अपि पावरको हकप्रद शेयर बजारमा आउँदै ! - Arthasansar
अपि पावरको हकप्रद शेयर बजारमा आउँदै !
शुक्रबार, २३ असोज २०७७, ०८ : ०७ मा प्रकाशित
यस आयोजना निर्माणका लागि जम्मा रु. ७४० करोड लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । कम्पनीले कुल लागत मध्ये ३० प्रतिशतले हुने रकम रु. २२२ करोड आफ्ना शेयरधनीहरुलाई हकप्रद शेयर जारी गरी २ चरणमा रकम संकलन गरी लगानी गर्ने योजना गरेको छ । बाँकी ७० प्रतिशतले हुने रकम रु. ५१८ करोड हिमालयन बैंक लिमिटेडको अगुवाईमा क्रमशः कर्मचारी संचय कोष, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड, नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड र सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड सहभागी गरी आयोजनाको सह–वित्तियकरण ९ऋयलकयचतष्गm०बनाई बैंक ऋण प्रवाह गर्नेगरी वित्तिय व्यवस्थापन सम्झौता मिति २०७७ साल आश्विन ११ गतेका दिन सम्पन्न गरेको छ ।
हकप्रदकाे बारेमा अन्य विवरण तलकाे सूचना मार्फत हेर्नुहोस् :